Akaụntụ m - RayHaber
I chefuola paswọọdụ gị?
Data nkeonwe gị ga-akwado ahụmahụ gị na weebụsaịtị a, jikwaa ohere na akaụntụ gị, na iwu nzuzo ga-eji maka nzube ndị ọzọ akọwapụtara na ibe anyị.
Akuko Nsiti akwukwo AK nke Ray Topinden, Opposition? | Nhọrọ okporo ụzọ nhọrọ 20 / 05 / 2012 Ngwunye okporo ụzọ ntanetị: N'oge a, a na-enwe òtù AK na ndị omeiwu CHP. O nwere ike iju onye ọ bụla anya na ọ gaghị enwe ihe ijuanya mgbe otu n'ime ndị na-achị achị na-esote nzukọ ndị a. N'agbanyeghị na ike maka atọ okwu bụ nzuko nke AK Party ihe ike na-akpali akpali ... a dynamism nke a n'uche na-egbukepụ a local ntuli aka a ga-enwe na xnumx't October jụrụ atụmatụ ... otú ntuli aka ọrụ a ga-anọ n'oge okpomọkụ. Usoro a na-ejikarị njedebe nke nnukwu akụrụngwa na-eme njem na obodo ukwu, karịsịa na Istanbul. Ọ dị mma ịgụ ole na ole. Ọmarịcha nrọ nke Istanbul nke Marmaray na-adị na narị afọ gafere na 2013. N'oge ahụ, site na Kadıköy ka Kazlıçeşme, site na Anatolia gaa na Europe
N'ulo onyonyo na uzu akuko nke uzo di iche iche: Enwe ike na ndi oru 14 / 07 / 2012 Code module: 840UH0018 Aha modul: Ike na Onye Nwekọ Akaụntụ Nkọwa: Nke a modul bụ ihe mmụta nke a na-eme atụmatụ ntinye aka na ụgbọ oloko na mkpara ndị mmadụ na ụgbọ oloko. Pịa ebe a ibudata.
MHP Gökçek jụrụ Ahịa Metron 24 / 01 / 2014 MHP Gokceke jụrụ ajụjụ banyere Metro: Mmiri mmiri metro na-ada n'ihi mgbawa nke nnukwu idei mmiri na ileghara anya na iburu ụgwọ ahụ dị arọ. Nationalist Movement Party (MHP) Onye isi ochichi obodo Ankara, Fatih Cetinkaya, "n'ihi na Ankara Metropolitan Municipality leghaara anya, kwupụtara na ọtụtụ nde dollar na ihe onwunwe ọha mmadụ lara n'iyi na n'iyi," o kwuru. MHP Ankara Provincial Presidency Legal Commission banyere mbipụta nke iju mmiri ahụ na mbibi nke akụkọ ahụ onyeisi oche nke ógbè a na-akwadebe ya bụ Cetinkaya kwuru, sị:
Esi mee ka BillNNP Bill Bill Account na Ankara-Sivas YHT 27 / 03 / 2018 Maka oru ngo nke elu-igwe (YHT), nke ga-ebelata njem Ankara-Sivas ruo awa abuo, a na-eme ememe "rail train ör" n'ụbọchị gara aga. Dị ka Çiğdem si kwuo, n'akwụkwọ akụkọ banyere ememe ahụ e mere na Yozgat-Yerköy, otu n'ime ọdụ ụgbọ okporo ígwè ahụ, Minista Ụgbọ njem Ahmet Arslan, Yozgatlı Deputy Prime Minister B. Bozdağ, Minista Education Minister nke Sivaslı İsmet Yılmaz, neon agba dịka mmụọ nke ememe ahụ nke a na-ahụ na uwe mgbidi. Ogige Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas bụ 393 kilomita ogologo. Mgbe etinye ego CapitalRay, 405 ga-abawanye na km. Minista na-ebu ụgbọ njem Arslan, mgbe a rụchara ọrụ ahụ Sivaslının 5.5, Yozgatlının 4.5 kwupụtara na oge awa ahụ ga-aga Istanbul. Onodu uba nke oru ngo bu N
TCDD General Manager Apaydın Unlocks Twitter Akaụntụ 14 / 12 / 2018 Otu n'ime ihe kachasị akatọ mgbe ihe mberede ụgbọ ala ahụ gburu 3 engineer 9 na merụrụ ahụ 47 na Ankara n'ụtụtụ ụnyaahụ bụ Onye isi NCD nke TCDD. İsa Apaydına na-ekpochi ihe ndekọ mgbasa ozi ọha na eze, nke ahụ anaghị emeghere onye ọ bụla. Ọ bụrụ na General Manager Apaydın mere mkpirikpi maka ihe mberede ụgbọ okporo ígwè dị elu, ọ gaghị ekwe omume ka onye ọ bụla mara ozi a ebe ọ bụ na ekpochila ya. TCDD General Manager Apaydın, mgbe akatọchara ya, ewepụla mkpọchi na akaụntụ ya dịka nke taa
Akuko Nsiti akwukwo AK nke Ray Topinden, Opposition? | Nhọrọ okporo ụzọ nhọrọ
N'ulo onyonyo na uzu akuko nke uzo di iche iche: Enwe ike na ndi oru
MHP Gökçek jụrụ Ahịa Metron
TCDD General Manager Apaydın Unlocks Twitter Akaụntụ